Sheekh CALI DHEERE oo si yaab leh uga hadlay khilaafka FARMAAJO iyo ROOBLE - Caasimada Online
Home Warar Sheekh CALI DHEERE oo si yaab leh uga hadlay khilaafka FARMAAJO iyo...
Sheekh CALI DHEERE oo si yaab leh uga hadlay khilaafka FARMAAJO iyo ROOBLE
Muqdisho (Caasimada Online) – Afhayeenka kooxda Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) oo iska soo duubay cod maqal ah oo socanaya 25 daqiiqo ayaa ka hadlay khilaafka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo khilaafkaan ku tilmaamay mid banaanka soo dhigay daacad darrada madaxda Soomaalida.
Codkaan oo ay haabisay warbaainta taabacsan kooxda Al-Shabaab ayuu sidoo kale Cali Dheere ku sheegay in hab-dhaqanka madaxda Soomaaliya iyo khilaafkaan uu daaha ka rogayo “xumaanta uu leeyahay nidaamka ku dhisan dimuqraadiyadda.”
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa intii uu hadlayey waxuu tusaale u soo qaatay dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso ee dhex-maray ciidamada Puntland iyo dagaalkii Guriceel ku dhex-maray Galmudug iyo Ahlu-Sunna, waxuuna isku dhacyadaan ku tilmaamay kuwo ka dhashay “daacad darrada iyo maamul-xumada dowladda ka jirta Soomaaliya,” sida uu hadalkiisa u dhigay.
“Soomaali oo dhan waxay indhaheeda ku arkeysaa sida shisheeyuhu isugu diray madaxda u fadhisa madaxtooyada, taasi waxay kaloo muujineysaa liidnaanta nidaamka dimuquraadiyadda,” ayuu yiri Cali Dheere.
Waxa uu sheegay in shisheeyuhu uusan waxaba u reeban Soomaaliya, isagoo madaxda Soomaalida ku tilmaamay kuwo u kala carara xarunta Xalane, iyagoo u kala dacwoonaya safiirrada reer Galbeedka.
Dhanka kale Afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere ayaa ka hadlay abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya, isagoo sheegay in hogaanka sare ee Al-Shabaab uu magacaabay guddi qaabilsan gurmadka abaaraha, kaas oo ka kooban 7-xubnood.